Wacaal Darey ah: Madaxweynaha Puntland iyo wafdigiisa oo kismaayo lagu soo dhaweeyay – Radio Daljir
Oktoobar 10, 2019 9:06 b 0
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa goor dhawayd gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maaluka Jubaland.
wafdiga madaxweynaha waxaa ku soo dhaweeyay garoonka Kismaayo madaxweyne Axmed Madoobe, Xildhibaano, Wasiiro, Odayaasha dhaqanka iyo dadweyne aad ufarabadan oo sitay calanka Jubaland iyo kan Puntland.
madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa loo gudbiyay xarunta madaxtooyada halkaas oo uu Warbaahinta kula hadlay madaxweyne Axmed Madoobe uga mahad celiyay wafdiga ka soo qayb galka caleea saarkiisa.
sidookale maanta galinka dambe waxaa la filayaa in ay kismaayo gaaraan madaxweyne yaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyo madaxda Xisbiyada siyaasada ee dalka.
dowadda Soomaaliya ayaa horay u sheegtay in aysan aqoonsanayn maamulka Axmed Madoobe waxayna horay uga digtay in aan laga qayb galin caleema saarkiisa.